Kabtanka Chelsea oo ka hadlay magacaabista macalin Jose Mourinho ee kooxda Tottenham – Gool FM
Dajiye November 21, 2019
(London) 21 Nof 2019. Daafaca reer Spain ahna kabtanka kooxda Chelsea ee César Azpilicueta, ayaa ka hadlay fikirkiisa kaga aadan in Jose Mourinho loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Tottenham Hotspur, kaddib wareysi uu dhawaan bixiyay.
Subaxnimadii Arbacada, kooxda Tottenham Hotspur ayaa ku dhawaaqday in Jose Mourinho uu yahay macallinka cusub ee Spurs-ka, isagoo badel u noqday Mauricio Pochettino, kaasoo shaqada laga ceyriyay Talaadadii lasoo dhaafay.
Kabtanka kooxda Chelsea ee César Azpilicueta ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Hada Jose Mourinho waa tababaraha kooxda Tottenham Hotspur, kama hadli karo arrintaas, balse waxaan ka hadli karaa waayihiisa Chelsea”.
“Mudo dheer ayaan ka soo hoos shaqeeyay isaga, waana kaga mahad celinayaa arrintaas, waxyaabo wanaagsan ayaan ka qabanay kooxdan”.
Daafaca reer Spain ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray:
“Waxaan u rajeynayaa Mourinho in wax walba ay u fiicanaadaan, kubada cagta maalin walba wey isbedelaysaa, isagu haatan wuxuu hoggaaminayaa koox kale”.